Ny K-Tek Machining dia manome serivisy OEM / ODM avy amin'ny ozinina famaritana mazava tsara miorina ao Dongguang, Sina. Izahay dia manome faritra milina avo lenta avo lenta ho an'ny indostria maro, vokatra mifandraika amin'ny milina, elektronika, mandeha ho azy, fiara, fitsaboana, angovo vaovao ary sehatra hafa. Azontsika atao ny manamboatra ampahany mifanaraka amin'ny zavatra takinao.
Mifantoka amin'ny famokarana avo lenta ny famolavolana sy ny famolavolana ny axis maro samihafa, afaka manome serivisy famolavolana sy famerenana milina marobe isika. Noraisinay ny masinina farany namboarina tamin'ny masinina tamin'ny masinina sy ny fanamboarana singa marina. Ny ampahany dia azo vokarina amin'ny ankamaroan'ny fitaovana: vy vy, aliminioma, varahina ary vy hafa vita amin'ny firaka.
K-Tek dia afaka manome serivisy fanodinana prototype sy machining an'ny machining CNC. Azontsika atao ny mamokatra amin'ny alimika vita amin'ny alimina, varahina, vy tsy misy fangarony, vy malefaka, firaka zinc, PMMA, Teflon sns. , fanapahana kojakoja, fikolokoloana hafanana, plating, fametahana, kofehy, kofehy mihodina sns.
Amin'ny maha mpanamboatra OEM antsika dia afaka manolotra Precision Machining Machines Precision amin'ny fitaovana maro karazana izahay:
• Fitaovana: firaka aliminioma, varahina, vy tsy misy fangarony, vy malefaka, firaka zinc, PMMA, Teflon sns.
• Famaranana ety ivelany: plating, anodize, Zn / Ni / Cr plating, firavaka volamena / volafotsy, inactivation, fitsaboana hafanana, firakotra vovoka sns.
• Fitaovana: 3 axis cnc Machining, 4 axis cnc Machining, 5 axis cnc Machining, milina mahazatra, WEDM-LS, Mirror EDM, Grinder anatiny / ivelany, fanapahana laser, 3D CMM, fandrefesana haavo ary mpanadihady fitaovana sns.
• Fandeferana amin'ny milina: 0,005-0.01mm.
• Sanda maha-henjana: latsaky ny Ra0.2.
• Fitaovana farany, fitaovana mety, fitaovana, fitaovana fanapahana.
• Fizarana novokarina mifanaraka amin'ny sary na santionany.
• Serivisy haingana sy matihanina ary fanampiana, vahaolana mamorona sy manavao.
• Fahaiza-manao feno, fifanarahana famatsiana maharitra.
• Fotoana miasa mora, fanohanan'ny injeniera, ISO 9001: 2015 voamarina.
Manana mpiasa 200 izahay izao. Ny vokatray manodidina ny 20% aondrana any Japon, 60% aondrana any Eropa sy Amerika, afaka manome anao kalitao avo sy vidiny mifaninana izahay.